လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ရွှေကိုရိုက်နိုင်သလား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2010 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2010 Douglas Karr
Foresee အဆိုအရ ... ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည် ယနေ့ Facebook နှင့်ဆက်စပ်သောလက်လီရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအချို့မှတွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤတွင်သူတို့၏တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
စျေးဝယ်၏ 56% ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့် e-retail ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသူငယ်ချင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း နောက်လိုက်လား သို့မဟုတ် 'subscribe? ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာနှင့် Youtube စသည့်လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်သေဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်သူများသည်လူမှုရေးဆိုဒ်များရှိလက်လီရောင်းချသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအမှန်တကယ်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
Facebook သည်စျေးဝယ်သူများထံရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်သူအားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်သည် Facebook နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်သူများအွန်လိုင်းသုံးသူများဖြစ်ကြသည်။ ၈၀% ကျော်က Facebook ကိုသုံးကြသည်။ သို့သော်ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင် ၁၀၀ ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများကိုတရား ၀ င်ကြည့်ရှုခြင်းကလေးပုံတစ်ပုံသည်တရားဝင် Facebook ရှိနေခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်သူများ၏ထက်ဝက်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တည်ရှိမှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ဖောက်သည်များအဓိကအားဖြင့်အပြန်အလှန် လူမှုမီဒီယာအပေါ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများအကြောင်းလေ့လာရန်အတွက်ဆိုဒ်များ ၅% သာဖောက်သည်အထောက်အပံ့အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအဓိကအသုံးပြုသည်လောစျေးကွက်သမားတစ် ဦး ၏အိပ်မက်ပြည့်စုံသည်။ စားသုံးသူတွေဟာကုမ္ပဏီတွေကိုလိုချင်ကြလား။ သတင်းအချက်အလက်, အရောင်းနှင့်အထူး; လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်၎င်းအားမည်သို့ထိရောက်စွာပေးရမည်ကိုလေ့လာရန်သာလိုသည်။
ငါသဘောမတူ "Facebook သည်စျေးဝယ်သူများထံရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ " ငါထင်တာကတော့ဒီဟာကိုပိုကောင်းအောင်ရေးနိုင်တာပဲလို့ထင်တယ်။ Facebook ဟာအခုအချိန်အထိလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့လူမှုကွန်ယက်နဲ့အကြီးမားဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကို ဦး ဆောင်နေတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးလက်လီရောင်းချမှုကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ” တက်တက်ကြွကြွအသုံးပြုသူ ၁၇၅ သန်းရှိပြီးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်စျေးဝယ်သူများစွာရှိသည်။ ဒါက "ကားမောင်းတဲ့သူတွေကလစဉ်ဓာတ်ငွေ့ဝယ်ဖို့အရမ်းများပါတယ်" လို့ပြောတာပါ 🙂
ကျနော့်အမြင်တွင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ရောက်ရှိ အခုအချိန်မှာစျေးဝယ်သူ, လက်ချ, ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မသွားပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် Facebook တွင် ၀ ယ်ရန်လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုမကြာခဏထိမှန်လေ့ရှိသည်။
Facebook ကသုံးစွဲသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်မလျှော့ချပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒီမီဒီယာအစီရင်ခံစာကြောင်းသက်သေပြ စားသုံးသူများကဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်လက်လီရောင်းသူများနှင့်ဆက်သွယ်လိုကြသည်.
ဖြေဆိုသူ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်အမှတ်တံဆိပ် ၁ မှ ၅ ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၆ ခုမှ ၁၀ ခုအထိဆက်သွယ်သည်ဟုဆိုသည်။
ဖြေဆိုသူ ၈ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့်အမှတ်တံဆိပ် ၂၀ ကျော်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။
ငါမတိုင်မီကဆိုပါတယ် လူမှုမီဒီယာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသံချဲ့စက်တစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်း။ Facebook ဟာကြီးမားတဲ့အသံချဲ့စက်တစ်ခုပဲ။ ၎င်းသည်အသင်း ၀ င်များ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဝေမျှနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်ထိုအသင်း ၀ င်များအားဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိလျှင်။
Tags: အီးမေးလ်ကုန်ကျစရိတ်အီးမေးလ်စျေးနှုန်းအီးမေးလ်ကုန်ကျစရိတ်ပေးပို့ပါWordPress အတွက် Google AnalyticsGoogle Webmaster tools များလူမှုမီဒီယာ dashboardsရုပ်မြင်သံကြားtera ဒေတာ
WordPress စာရေးဆရာများစွာကို Google Analytics ဖြင့်ခြေရာခံခြင်း
10:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 18
စားသုံးသူများသည်အွန်လိုင်းတစ်ခုခုဝယ်ရန်စီစဉ်သောအခါ၊ သူတို့သည်အွန်လိုင်းကိုအထူးသဖြင့်ထိုအရာများကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်သူတို့သည်ရှာဖွေခြင်းမပြုမီလူမှုကွန်ယက်ဆိုက်များတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းရှိမရှိသိရပြီဖြစ်သည်။ လူအတော်များများဟာ Facebook မှာ၊ Twitter (သို့) တခြားလူမှုရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်ကတခြားအရာတွေမလုပ်ခင်မှာအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။
အကယ်၍ သုံးစွဲသူများသည်လူမှုရေးကွန်ရက်ဆိုက်များကိုရှေး ဦး စွာအသုံးပြုပါက Foresee မှထုတ်ပြန်ချက်သည်တရားဝင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
24:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 19
ဂရိတ် Post ကို Doug ။ ငါကား / သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆက်စပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ လိုင်းချစ်ကြတယ်။ သင်ဤဆွေးနွေးမှုသို့အပလီကေးရှင်းများကိုထည့်နိုင်သည်။ Iphone ရှိသူများတွင် Apps များပိုများသည်။ 🙂
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ငါဟာဒါဟာအများကြီးပိုကြီးမားတဲ့အဆိုင်းဖြစ်ပြီးအခွင့်အလမ်းများစွာရရှိစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Amazon ၏“ Fan” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်သူတို့၏ Fanpage သို့ပြန်ရောက်သည်ကိုငါမသိ။ ကျွန်ုပ်သည် Amazon App ဖြင့်တစ်ချိန်လုံးဝယ်သည်။ ငါအနောက်တောင်ပိုင်းကိုချစ်ပြီးတွစ်တာမှာလိုက်နာပါ။ ဒါပေမယ့်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အနောက်တောင်အပလီကေးရှင်းနှင့်အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသောဘဏ်တစ်ခုမှပြောင်းလိုက်သည်။ သူသည်ပန်ကာစာမျက်နှာ ရှိ၍ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်လိုက်လျှောက်နိုင်သည်။ Chase မှာအချိန်တော်တော်များများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောထူးခြားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။